Global Voices teny Malagasy » Manohy Ny Famoriam-bahoaka Ireo Mpanohitra Ao Maldiva Na Dia Teo Aza Ny Fanakanana Nataon’ny Governemanta · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Jolay 2016 5:26 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsimo, Maldiva, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Zon'olombelona
Nanao famoriam-bahoaka voalohany  tamin'ny 21 Jolay 2016 ny sehatra fanoherana vaovao vao natsangana tao Maldiva, ao an- drenivohitr'i Male, na dia teo aza ny fandavan'ny governemanta  tamin'ny fanomezan-dàlana.
An'arivony no tonga tamin'ny fivorian'ny Firaisan'ny Mpanohitra ao Maldiva na Maldives United Opposition (MUO) , izay nahitana ny mpanohitra mpitarika niteny sy ny mpitarika avy any an-tsesitany sasany nanatevin- daharana tamin'ny alàlan'ny fitaovana fifandraisan-davitra.
Efa nanan-kery tamin'ny Novambra lasa teo ny fandraràna ny hetsi-panoherana an-dalambe tao an-drenivohitra Male izay nisian'ny famoretan'ny polisy tamin'ny hetsi-panoherana naharitra telo andro  nomanin'ny antoko mpanohitra antsoina hoe ny Antoko Demokratika Maldiviana. Nanomboka tamin'izay no nanakana ny hetsi-panoheran'ny mpanohitra maro ireo polisy ary nanenjika ireo mpanao gazety  [mg] sy ny fampahalalam-baovao nitatitra ny fihetsiketsehana.
Maka ny sora-baventy milaza ny famoriam-bahoaka ataon'ny mpanohitra ny polisin'i #Maldives . Tokony alalahana ny sehatra. Teo amin'ny rindrina .
Tamin'ny 1 Jona 2016, nanomboka ny sehatra MUO  ireo antoko mpanohitra Maldiviana maro sy ireo mpanao politika malaza, mitaky ny famerenana amin'ny laoniny ny asan'ny demokrasia ao amin'ny firenena anatin'ny Ranomasimbe Indianina. Ny Dr. Mohamed Jameel Ahmed , filoha lefitra teo aloha an'ny Maldiva izay monina any an-tsesitany ankehitriny any amin'ny Fanjakana Britanika no mitarika ny sehatra; i Ali Waheed no lefitra manampy azy, izay filohan'ny Antoko Demokratika Maldiviana.
Nikasa ny hanao famoriam-bahoaka voalohany ny MOU tamin'ny 14 Jolay, kanefa voatery nahemotra  ny 21 Jolay izany noho ny faharatsian'ny andro. Nanome toky ny hanao ny hetsika izy ireo na dia teo aza ny fanafoanana  ny fahazoan-dàlana tamin'ny minitra farany nataon'ny minisiteran'ny fampialofana
Ny hanala ny filoha Abdulla Yameen Abdul Gayoom amin'ny alàlan'ny fomba ara-dalàna no paikan'ny MOU ary hitsara azy noho ny famotsiam-bola . Mitady ny “fiarovana ny zon'ny olona 1700 eo an-dalam-pitsarana, fanadihadiana ary fisamborana” ihany koa ny sehatra .
Tamin'ny Martsa 2015, voaheloka teo ambanin'ny lalàna Manohitra ny Asa Fampihorohoroana tao Maldiva i Nasheed ary voaheloka higadra 13 taona an-tranomaizina. Nataon'ny Amnesty International hoe ” fanodikodinana ny rariny  ” ilay fitsarana .
Niampanga ny governemantan'ny Filoha Yameen ny mpanohitra tamin'ny fanapenam-bava ny fampitam-baovao sy ny fanamelohana ny tsy fitovian-kevitra ara- politika. Nandroaka ny filoha lefitr'i Yameen,  Mohamed Jameel Ahmed, ny parlemanta tamin'ny taon-dasa, izay voampanga ho mpamadika taorian'ny tsy fitovian-kevitra tao anatin'ny volana maromaro teo amin'ny roa tonta; anisan'ny mpikambana ao amin'ny MOU i Jameel Ahmed ankehitriny.
Nanome soso-kevitra ny hanavao ny fitantanam-panjakana i Yameen izay mety hanome fandaminana ity fitondran-tena ity. Hoy ilay bilaogera mpila ravinahitra Maldiviana Azra Naseem tao amin'ny Dhivehi Sitee  momba ilay fanavaozana :
Raha natao ihany tamin'ny farany ny famoriam-bahoaka MOU, voatazona nandritra ny fotoana fohy  tamin'ny 16 Jolay ny mpikambana ao amin'ny Parlemanta Ahmed Mahloof, ilay mpitondratenin'ny MOU, sy mpikambana telo hafa rehefa nanentana ny famoriam-bahoaka tamin'ny 21 Jona. Nitatitra ny mpanao gazety Mohamed Junayd :
Mihazona ny tsiambaratelon'ny didim-pitsarana ho an'ny MP @AhmedMahloof  mikatom-baravarana noho ny antony fiarovam-pirenena ny Fitsarana Heloka Bevava ao #Maldives .
We are free and it's time for Masburi Riha #21July  #MavesDhaanan  🙂 pic.twitter.com/TucctxjnRP 
Afaka isika ary tonga ny fotoana ho an'ny Masburi Riha # 21Jolay  #MavesDhaanan  🙂
Taorian'ny Fetin'ny Asa tamin'ny taon-dasa, nisy ny fandraisana anjara goavana tamin'ny fihetsiketsehana manohitra ny governemanta tao #Maldiva  raha nanao ny famoriam-bahoaka voalohany ny mpanohitra
Mitranga amin'izao fotoana izao famoriam-bahoaka faobe manohitra ny didy jadona sy ny tsy rariny ataon'ny governemanta . Nahavory olona 1000 .#Maldiva  @BBCWorld  @CNN  @ndtv  pic.twitter.com/AymD8X0I01 
Nivory faobe tao Male ny ankamaroan'ny mpanohitra’, #Maldives  niantso hanangana governemanta tetezamita. pic.twitter.com/MXaxwpvBpt 
#InthiqaaleeMagahRaajje  Jalsa #LivePics  akaikin'i MDP Haruge Harahahdhu#MUO pic.twitter.com/V4t4HgUXxG 
MIVANTANA ao amin'ny #Periscope : Miseho izao: famoriam-bahoakan'ny Mpanohitra ao MALDIVA #InthiqaaleeMagahRaajje  #MUO  Saabahey 💪🏾👏 https://t.co/rToGF66gm9 
Nisy ihany koa ny sarin'ireo famoriam-bahoaka  navoaka tao amin'ny Facebook . Ho hita eo raha hisy vokany ara-politika tsy ho ela ao Maldiva ilay sehatra vaovao .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/07/27/85813/
 famoriam-bahoaka voalohany: http://maldivesindependent.com/politics/live-opposition-coalition-rally-gets-underway-125519
 fandavan'ny governemanta: http://en.mihaaru.com/maldives-govt-continues-to-deny-venue-for-opposition-rally/
 famoretan'ny polisy tamin'ny hetsi-panoherana naharitra telo andro: http://maldivesindependent.com/politics/police-warns-mdp-to-end-proposed-three-day-protest-by-midnight-on-friday-120179
 ireo mpanao gazety: https://mg.globalvoices.org/2016/04/13/81155/
 nanomboka ny sehatra MUO: http://www.thehindu.com/news/international/maldivian-opposition-leaders-announce-shadow-cabinet-in-london/article8677836.ece
 fanodikodinana ny rariny: https://www.amnesty.org/en/articles/news/2015/03/maldives-mohamed-nasheed-convicted-terrorism/
 Nandroaka ny filoha lefitr'i Yameen,: https://www.theguardian.com/world/2015/jul/22/maldives-government-sacks-vice-president-treason-mohamed-jameel
 voatazona nandritra ny fotoana fohy: http://maldivesindependent.com/politics/mp-mahloof-arrested-while-promoting-opposition-rally-125394
 sarin'ireo famoriam-bahoaka: https://www.facebook.com/events/176160529464811/?active_tab=posts